Iimpazamo ezintlanu eziPhambili kwiNkqubo yokuThengisa nge-imeyile kufuneka uyiphephe | Martech Zone
Ngaphezulu Abasebenzisi abayizigidi ze-222 e-US kuphela, i-imeyile inamandla amakhulu njengeqonga lokuthengisa. I-imeyile sisixhobo esiguqukayo esinokusetyenziselwa ukufudumeza izikhokelo ezibandayo, ukunxibelelana nabathengi abakhoyo kunye nokufikelela kumathemba okuqhuba uphuhliso lweshishini elitsha.
Iingcali zokuthengisa nge-imeyile ziyaziqonda iziseko, ezinje ngokubaluleka kokwenza umgca wesifundo esinyanzelayo kunye nokubandakanya umnxeba onamandla wokuthatha isenzo. Kodwa nabathengisi be-imeyile abanamava banokuwela kumgibe wokusebenzisa iindlela ezingasebenziyo okanye iindlela zokuthengisa nge-imeyile ezinokuthi zenzakalise uphawu lwazo. Nazi iimpazamo ezintlanu ezinkulu ezenziwa ngabathengisi be-imeyile- kunye nendlela yokuziphepha.
Benzisa i Uluhlu lweedilesi ezimbi ze-imeyile. Nokuba uthengiwe okanye uhlanganiswe ngokuhamba kwexesha ngaphakathi, uluhlu lwe-imeyile olubi lunokupela ingxaki. Iinkqubo eziyilelwe ukumelana nogaxekile zikhangela ukusetyenziswa kweedilesi ze-imeyile ezingasebenziyo, ke iidilesi ezininzi eziphelelwe lixesha zinokufumana ii-imeyile zenkampani yakho zibanjiswe kumgibe wogaxekile. Ziqhelanise nococeko lwedatha elungileyo ukuqinisekisa ukuba oku akwenzeki kuwe.
Ayisebenzisi design ezwayo. Malunga ne-50% yeimeyile ngoku zivuliwe kwifowuni ephathekayo, ke ukuba awusebenzisi uyilo oluphendulayo- imigangatho yoyilo elungiselela umxholo wescreen sefowuni-isiqingatha sabamkeli bakho asizukukwazi ukujonga i-imeyile yakho ngaphandle kokungena ngaphakathi umxholo kunye nokuskrola usiya kwelinye icala uye kwelinye. Uninzi luya kuwutshabalalisa umyalezo wakho endaweni yoko.
usebenzisa Amaqonga onxibelelwano lwabathengi kwimikhankaso ye-imeyile. Abanye abathengisi be-imeyile bathenga uluhlu kwaye bazilayishe kumaqonga anjengeMeyileChimp okanye uConstantContact, angayenzelwanga le njongo. Ngapha koko, iyaphula imigaqo yenkonzo kwaye unokufumana ukuba iakhawunti yakho ivaliwe kwaye igama lakho lingahlulwa igama. Sebenzisa i isixhobo sokuvelisa ezifana Intengiso endaweni yoko.
Uluhlu lokuthenga ngexabiso elihle kakhulu ukuba liyinyani. Njengakwezinye iindawo ezininzi zobomi, ufumana oko ukuhlawulayo, ke thenga uluhlu lwakho lwe-imeyile kumthombo odumileyo. Ukuba ukhetha enye kwiDVD yeedola ezili-100, ngokuqinisekileyo iya kuba neadresi ye-imeyile efileyo, enokuthi ifumanise ukuba indawo yakho idwelisiwe. Uluhlu olucocekileyo lubiza imali kuba kuthatha utyalomali ukuqokelela ngokufanelekileyo, ukukhuhla kunye nokugcina idatha.
Ukungaphumeleli ekujoliswe kubo abafumana i-imeyile. Umkhankaso osebenzayo we-imeyile uhambisa umyalezo olungileyo kumamkeli ofanelekileyo. Qinisekisa ukuba uluhlu lwakho lwe-imeyile lujolise kubemi ozama ukufikelela kubo. A tshiza uthandaze indlela enokubonakala ngathi idlala iipesenti, kodwa kukho indleko eziphezulu kakhulu zokuthumela i-imeyile, ke ukujolisa ngononophelo sisitshixo sempumelelo.
Zininzi izinto ezingena kumkhankaso omkhulu we-imeyile. Isithembiso ngokucacileyo siyinto ebalulekileyo. Unjalo ke nomyalezo-ukusuka kumgca wesifundo ukuya kwifowuni yokuvala isenzo. Kodwa kuthatha okungaphezulu kunemveliso enomtsalane okanye isithembiso senkonzo kunye nekopi esebenzayo yokwenza iphulo eliphumelelayo. Uyilo lwe-imeyile kunye nendlela yokuhanjiswa nazo zibaluleke kakhulu.
Idatha ehlaziyiweyo-iidilesi ezilungileyo ze-imeyile kunye nolwazi oluchanekileyo ekujoliseni- kubalulekile kakhulu. Kwintengiso, konke malunga nokufumana umyalezo olungileyo kumntu olungileyo ngexesha elifanelekileyo. Lo mgaqo uyinyani kwintengiso ye-imeyile ngokunjalo. Ukuba ungaziphepha ezi mpazamo zintlanu zokuthengisa, uya kuba usendleleni eya empumelelweni.
tags: iidilesi ezimbi ze-imeyileukuthenga uluhlu lwe-imeyileiimpazamo eziphambili ze-imeyileimeyile yokuthengisa iimpazamoamaqonga e-imeyiledesign ezwayoisahluloekujoliswe kuyo